Xildhibaano ka hor yimid magacaabista Golaha Wasiirada Hirshabelle – STAR FM SOMALIA
Xildhibaano ka hor yimid magacaabista Golaha Wasiirada Hirshabelle
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Maamulka Hirshabelle, ayaa si adag kaga soo hor jeestay magacaabista Wasiirada cusub ee Maamulkaasi oo shalay uu ku dhawaaqay Madaxweyne Cali Cabdulaahi Cosoble.
Xildhibaan Maxamuud Wabar oo ka mid ah mudanayaasha Baarlamaanka ayaa sheegay in Madaxweyne Cosoble uu wasiirada ku soo magacaabay sharci darro iyo la tashi la’aan waa sida uu hadalka u dhigay.
“Hirshabelle dadka deggan Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe ayaa wada leh, waxaa loo baahnaa wadatashi iyo is afgarad, Jaabka dambe ayuu warqad kala soo baxay oo uu iska soo magacaabay wixii uu doonay, waa arrin aan kasoo horjeedno” ayuu yiri xildhibaanka.Xildhibaan C/Wali Sheekh Cali;oo ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay in tiro ahaan ay gaarayaan 50 Xildhibaan kana soo horjeedaan meel marinta Golaha wasiirrada ee uu magacaabay Cosoble.
Xildhibaanku waxaa uu sheegay in sida loo magacaabay Wasiirrada ay qalad tahay islamarkaana ay Xildhibaannada dad metalaan sidaas darteedna aysan qaadaneyn magacaabis aan loo sinneyn.
Xildhibaan C/Wali Sheekh Cali oo ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa dhankiisa sheegay in tiro ahaan ay gaarayaan 50 Xildhibaan kana soo horjeedaan meel marinta Golaha wasiirrada ee uu magacaabay Cosoble.
Xildhibaanku waxa uu sheegay in sida loo magacaabay Wasiirrada ay qalad tahay islamarkaana ay Xildhibaannada dad matalaan sidaas darteedna aysan qaadaneyn magacaabis aan loo sinneyn.
Durba Golaha Wasiirada cusub ee Hirshabelle waxa ay la kulmayaan diidmo adag oo kaga timid Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulkaasi.
Ganacsade lagu toogtay Suuqa Bakaaraha
Axmed Madoobe oo Muqdisho kula kulmay Madaxweynaha cusub iyo Madaxweynihii hore